Zviratidzo Zvinogona Kuratidzira A Trend Reversal | Ehupfumi Zvemari
Zviratidzo zvinogona kuratidza kushandurwa kwechimiro
Kuve mune zvakaenzana hakuzovi nesarudzo kunze kwekuve mukuita. Ndiyo imwe ye zvinodiwa kushanda mune chero yemidziyo yezvemari. Nekuti kuve muitiro kuchaita kuti zvinhu zvive nyore gadziridza mafambiro mumari. Chero zvazvingaitika, imwe yemakiyi ekuzadzikisa zvinangwa izvi inoenderana nekuona shanduko yemaitiro neimwe kumhanya. Ichave iri zano rinonyanya kubatsira, kuvhura uye kugadzirisa zvigaro mumisika yemari.
Kuti basa iri riitwe nevashambadzi vadiki nepakati nepakati zvive nyore, nhevedzano yemasaini yakabvumidzwa izvo ichapa zvinopfuura imwechete pane kufamba uku kwemari yemari. Pakutanga zvingave zvakaoma kuti uvabate, asi nekudzidza kwakaringana zvinokwanisika kusvika pachikamu chakakosha chekuongorora kwehunyanzvi. Asi chero zvakadaro ivo vachapa iwo marongero ekushanda mumisika yemari nedziviriro huru. Kunyangwe iine mikana mikuru yekugadzira mari inowanikwa kumba imwe yemabasa akaitwa.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, varimi vanozove nematanho ematanho kuitira kuti vazive panowanikwa shanduko dzemafambiro. Haasi maitiro akafanana, asi pane zvinopesana vanobva kwakasiyana nzira dzekudyara, sezvo iwe uchizokwanisa kuongorora kubva zvino zvichienda mberi. Zvichava zvakakosha kuti iwe ubhadhare zvakanyanya nekuti muchidimbu mari dzako dzinoenderana neizvi kupfuura mamiriro akasarudzika anokura mumisika yemari.
1 Maitiro: akabhadharwa mazita
2 Kutsigira uye kuramba kuputsa
3 Kuvandudzwa kwechiitiko chisingafanoonekwi
4 Kupfuura zvinofamba zvikamu
5 Chii chekuita mukuchinja kwetsika?
Maitiro: akabhadharwa mazita
Chimwe chezviratidzo zvakavimbika kwazvo chinouya kubva mukuwedzera kwehuwandu hwechengetedzo dzakatengwa mumisika yemari. Kana ivo vakakwira kupfuura zvakajairwa chiratidzo izvo zvinowanzo kuratidza kuti pane shanduko yakakura mune chinzvimbo chemasheya akanyorwa. Kusvikira pakuti ichashanda senzvimbo yekutanga yekutenga masheya. Nerubatsiro rukuru rwunopa nzira ine hudzamu hukuru kuti izvirambe pachayo pakukwira. Kunyanya kana shanduko yemafambiro ikabatwa nenguva.
Pane zvinopesana, shanduko yemafambiro, kubva mukusimudzira kuenda kune yakasarudzika, ndicho chikonzero chakakwana chekusiya zvinzvimbo mumisika yemari. Saka nenzira iyi, kurasikirwa hakuiswi mune yekudyara portfolio izvo zvawakagadzira kusvika ikozvino. Hazvishamise kuti iparamende inogona kukubatsira kudzivirira mamiriro asingafadzi kudzivirira zvido zvako semushambadzi. Nekuti zvirizvo, ivo vanokwanisa kuenderera kwenguva refu, kunyangwe makore senge mune mamwe emari midziyo.
Kutsigira uye kuramba kuputsa
Aya manhamba akakosha zvakanyanya kune gadzira chijana kune makotesheni, mune imwe pfungwa kana imwe. Nekuti zvinoratidza kuti zvinzvimbo zvevatengi zvakaiswa pachena pane zvevatengesi, kana zvinopesana. Chero zvazvingaitika, uye kuve nekuchengetedzeka kukuru mukuzorora uku, kunofanirwa kuperekedzwa nekuwedzera kwehuwandu hwebvumirano. Kana kupokana kwakakosha kukapfuurika zviri nyore, inogona kuve iyo inokonzeresa kukoshesa kunogona uye kwakasimba kwazvo mumitengo yavo.
Kunyangwe kana chiri chakapesana, ndiko kuti, zvinopesana hazvipfuurwe, chichava chiratidzo chakajeka chekushaya simba kwehunhu hwakakanganiswa. Kusvika padanho rekuti mutengo unowira uchatanga, kunyangwe kutsvaga rutsigiro runotevera kumisa kurasikirwa mukukosha. Sezvazviri zvine musoro kufunga mune ino mamiriro, hakuzove nemimwe mhinduro kunze kwekukurumidza kusiya zvinzvimbo kuti uve mune zvemari uye ugone kutenga masheya, asi ino nguva nemitengo yakachipa. Icho chimwe chedzidziso dzakareruka dzinogona kudzidzwa mumusika wemasheya. Kunyangwe nevashambadzi vasina ruzivo rwakanyanya mumisika yemari.
Kuvandudzwa kwechiitiko chisingafanoonekwi
Chimwe chezvinhu zvinokonzeresa shanduko iyi mukuitika kuti zviitike zviri mukutaridzika kwechiitiko chakakosha kwazvo chinogona kushandura nyika zhinji yemusika wemasheya. Semuenzaniso, kusvika kwedambudziko idzva rezvehupfumi, musiyano une hukasha mukushandiswa kwemitero yemitero kana kunyange chiitiko chezvematongerwo enyika kana chezvemagariro chakakosha kukosha. Kusvika padanho rekuti mamiriro emitengo anosiyana nenzira yakakura uye dzimwe nguva yakanyanyisa. Zvakwana tarisa shanduko yemusika wekutengesa Mumakore mashoma apfuura kusimbisa chinhu ichi chave zvakare chakasimba mukutyaira iyo shanduko shanduko.
Nekudaro, aya ma parameter anofanirwa kuyerwa nehungwaru hukuru nekuti kuvimbika kwavo hakuna kusimba senge mumamiriro apfuura. Nekuti zviripo, mune inopfuura imwe kesi zvinogona chete kungo sanganisira chaiyo chaiyo kufamba mune yemugove mutengo. Kuburikidza nekufamba uko Iwo anovavirirwa zvakanyanya pane ipfupi mazwi. Asi nekusaenderana kwakazara mune dzakareba nguva dzekugara. Saka hazvishamise, saka, kuti vanogona kukutsausa pane imwe nguva kana imwe uye vanogona kukutungamira kuti uite basa risiri iro kana zvirinani zvisina kukurudzirwa zvakanyanya.
Nekudaro, nhau dzakakosha dzinoitika dzinenge mazuva ese uye yakawanda yacho ine chekuita nemitengo yemidziyo yemari. Kunyangwe mune zvese zvingangodaro havana kukwana kuti vachinje maitiro emusika wemasheya. Ichi chinhu chaunofanirwa kufunga kuti usazvione iwe mune imwe isingadiwe mamiriro. Chero nzira, zvakanaka kuti iwe ugovaisa mupfungwa kana uchigadzirira yako inotevera yekudyara portfolio. Iwe haugone kukanganwa kuti chero mhando yeruzivo inogara iri yakakosha kwazvo, uye zvimwe zvakawanda zvine hukama nenyika yakaoma yemari.
Kupfuura zvinofamba zvikamu
Imwe yemasaini ekuti chero hupi hwezvemari inokupa iwe ndeyekukosha kwematanho enhare ekuchinja kwenzira. Hazvishamisi kuti kuitika kwayo kunogona kuve kwakanyanya mune mamwe acho uye nekudaro iwe unofanirwa kuziva mafambiro aya mumifananidzo. Iwe haugone kukanganwa kuti idzi nzvimbo dzemitengo dzinogona kuumbwa mukati mavambo ekusiyana uku pane zvinoitika mumatura, zvikamu, uye indices yemasheya. Zvakare kushanda senzvimbo yekutanga kugadzira marongero ekutenga nekutengesa, zvinoenderana nesarudzo yega yega.
Chero zvazvingaitika, iri zano rekudyara iro rakaomarara kupfuura rapfuura. Pakati pezvimwe zvikonzero nei uchifanira kuunza kudzidza kukuru, zvese mukutsvaga kwayo uye nehunyanzvi hwekuita mafambiro mumisika yemari. Kusvika padanho rekuti zvinokutorera iwe zvishoma kuti uwane zviitwa izvi uine hukuru vimbiso dzebudiriro. Iko varimi vane ruzivo rwakadzama ndivo vanozove nebhenefiti shoma kupinza aya mamodheru ekuongorora.
Kana chiitiko ichi chikaonekwa, unenge usina imwe mhinduro kunze kwekutora nhevedzano yezviito zvine chinangwa chikuru chichave chekuita kuti mari yako ishande zvakanaka. Kuti izvi zvive zvakadaro, isu tinopa pazasi mamwe madhairekitori anogona kuve anobatsira mukuita kwako kubva ikozvino Uye izvo zvinogona kuve zvinotevera zvinotevera.
Ino ndiyo nguva yaunofanirwa ita chisarudzo, nzira imwe kana imwe. Kurumidza uye kuziva zvinangwa zvauri kutsvaga. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mumamiriro ari nani kuzadzisa zvinangwa zvakagadzwa kubva pakutanga.
Iwe haufanire kufunga kuti iwo mafambiro asingachinjiki, asi zvirinani kuti ivo vanokupa iwe kutendeseka kukuru sekukutungamira kubva kwavari kubva zvino zvichienda mberi. Iwe hauzombo kanganisike nerudzi urwu rwekuronga zano.
Inogona kunge iri nguva chaiyo yekusarudza iyo mamwe mabasa ane hukasha. Zvese mukutenga nekutengesa, zvinoenderana nechiratidzo chekuchinja kwemaitiro. Uine tarisiro yakanaka kwazvo yezvaunofarira.
Iwe unofanirwa kusarudza iwo matraki ayo anonyanya kubatsira pakutengesa zviyero. Hazvishamisi kuti vamwe vacho unogona kukutsausa pane imwe nguva chaiyo muhupenyu hwako semudhara mudiki nepakati.
Chero shanduko munzira inozobatsira shandura zvakanyanya yako portfolio yekudyara. Kunyangwe munzira yechisimba isina mamiriro emusika anoida. Iine nzira dzakasiyana dzekudyara uye pamwe dzinopatsanura mune zvimwe zviitiko.
Shanduko mumaitiro dzinofanirwa kutariswa sechokwadi mabhizimusi mikana. Nekuti zvirikuitika, zvikwata zvemusika wemasheya zvinogara zvichioneka kwaunogona kuita mari inobatsira munzira inoshanda zvakanyanya kupfuura pari zvino.
Kupa kutaridzika kwezviitiko izvi zvitsva, haufanire kungogumira iwe chete pakutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Asi iwe wakadaro zvimwe zvigadzirwa zvemari uko kwaunogona kugutsa zvaunoda nenyika yepasi pemari. Mari yekudyara, kutengesa chikwereti kana mvumo ndeimwe yemhando dzakakodzera.
Mukana mukuru unoburitswa neaya mafambiro mumusika wemasheya ndeyekuti iwo anotendera vashandisi kubatsirwa kubva kumusoro upside zvinogona kupfuura kuburikidza nedzimwe nzira. Kufanana nekuziva iyo nzvimbo yemutengo uko kwavanofanira kugadzirisa nzvimbo dzavo mumisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Zviratidzo zvinogona kuratidza kushandurwa kwechimiro
Izvo iwe zvaunofanirwa kuziva nezve fiat mari
India: mukana wemari